Kenya Oo Ku Dhawaaqday Inay Aqoonsanayso Somaliland, Sababaha Ay U Cuskatay Iyo Farmaajo Oo Ka Jawaabay - Jigjiga Online
HomeSomalidaKenya Oo Ku Dhawaaqday Inay Aqoonsanayso Somaliland, Sababaha Ay U Cuskatay Iyo Farmaajo Oo Ka Jawaabay
Nairobi (Jigjigaonline) – Dawladda Kenya ayaa shaacisay inay si degdeg ah ugu dhawaaqi doonto aqoonsi buuxa oo ay siin doonto Jamhuuriyadda Somaliland, isla markaana ay noqon doonto waddankii ugu horreeyey ee ictiraafa.
Kenya waxay sheegtay in dhawaan ay qaadi doonto tallaabooyin ay ka mid tahay aqoonsi ay kaga aargoosanayso Somaliya oo ay siinayso Somaliland oo muddo 28 sannadood ah beesha caalamka ka raadinaysay aqoonsi caalami ah, kaddib markii ay sannadkii 1991-kii dib ula soo noqotay xorriyaddeedii ay 1960-kii kula midowday Koonfurta Somaliya.
Qoraal kasoo baxay Kenya oo la gaadhsiiyey madaxweyne Somaliya ayaa waxa loogu sheegay in Nairobi ay ku hawlan tahay fulinta dhawr tallaabo oo dhamaantood dhabar-jabinaya Farmaajo, kuwaas oo ay qayb ka tahay inay noqonayaan waddankii ugu horreeyey ee aqoonsi siiya Somaliland.
Kenya oo muran dhinaca badda ah uu ka dhexeeyo Somaliya, ayaa waxay warqaddan ku sheegtay in haddii maxkamadda ICJ ay Somaliya u xukunto biyaha lagu muransan yahay, in iyaduna ay qaadi doonto tallaabooyin aargoosi ah.
Sida ay sheegayaan warar hoose oo laga helay Madaxtooyada Somaliya, Dawladda Kenya waxay ugu sheegtay qoraalkeeda oo ay sii marisay xafiiskeeda Muqdisho, in haddii maxkamadda ICJ ay Somaliya siiso biyaha badda in iyaduna ay qaadi doonto dhawr tallaabo oo kala ah:
-In Kenya ay awood xoog leh u adeegsaneyso Shacabka Gedo ee burburinaya derbiga ay Kenya ka dhiseyso Dhulka Soomaalida.
-In Guddi baadhis ah u saartay Kenya arrinta darbiga, wixii waxyeello ah ee gaartayna ay magdhow ka bixin doonto dowladda Somaaliya.
-In Kenya aqoonsaneyso Somaliland, haddii ay dowladda Federaalka ah sii waddo muranka Badda islamarkaana ay si toos ah ula xidhiidhi doonto Somaliland.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo warqaddaasi ay soo gaadhay 25-kii May ayaa 29-kii isla bishaas ku jawaabtay in dowladda Somaaliya aanay hayn caddeyn ku filan in shacabka Gedo ay burburiyeen darbiga ay Kenya dhistay.
Waxaa kale oo ay oo dawladda Somaaliya sheegtay in Kenya ay u oggolaatay in ay xafiis ka furato Hargeysa, haddii Kenya hanjabaaddeeda ka dhabeysana Somaaliya go’aan noocaas ah ka qaadan karto gooni u goosadka Mombasa ee dalka Kenya.
Wargeyska The Standard ee ka soo baxa Kenya oo warkan qoray ayaa la xidhiidhay Wasiirka arrimaha dibadda Somaaliya Axmed Ciise Cawad, markii la weydiiyay go’aanka Kenya ee Somaliland ayuu Wasiir Cawad ku qoslay isaga oo arrinta Mombasana miiska imaneyso.
Si kastaba ha ahaatee, Kenya ayaa wax walba u samaynaysa sidii ay ku heli lahayd badda Somaliya ee ay dhawaanta sheegatay taas oo la rumaysan yahay inay ku jiraan shidaal badan oo sabab u noqday damaca Kenya. Laakiin khilaafkaas ayaa waxa uu dhinaca kale faa’iido u noqon karaa Jamhuuriyadda Somaliland oo isqabsigaas ka heli karta aqoonsi buuxa oo ay muddo dheer u harraadanayd.
Shukaansiga Internet-ka ma caafimaad darra ayaa laga qaadaa?